Scratchcards မော်ကွန်းတိုက် | PoundSlots ကာစီနိုဆိုက် - £ 200 အပ်ငွေအပိုဆု!
ခေါင်းစဥ် : Ramesses စည်းစိမ်ဥစ္စာခြစ်ရာ
ခေါင်းစဥ် : Big Foot ခြစ်ရာ
ခေါင်းစဥ် : ကံကောင်းသူနံပါတ်များ
ခေါင်းစဥ် : germinator
ခေါင်းစဥ် : ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲ
ခေါင်းစဥ် : ပရိုတိန်း
ခေါင်းစဥ် : ခြောက်သေနတ်သမား Looter ရွှေ
ခြောက်သေနတ်သမား Looter ရွှေ
ခေါင်းစဥ် : စင်္ကာပူ
Scratchcards များသည်အဓိကအားဖြင့်ကတ်များကိုကုတ်ခြစ်ခြင်းနှင့်ကိုက်ညီသောသင်္ကေတများထုတ်ဖော်ခြင်းပါဝင်သည့်အရိုးရှင်းဆုံးလောင်းကစားရုံဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်္ကေတတစ်ခုစီသည်ကွဲပြားခြားနားသောတန်ဖိုးတစ်ခုစီရှိသည်။ သင်လျှို့ဝှက်သင်္ကေတများကိုတစ်ပြိုင်တည်းထုတ်ဖေါ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်တစ် ဦး ချင်းစီသင်္ကေတများကိုကလစ် နှိပ်၍ ဝှက်ထားသောသင်္ကေတကိုထုတ်ဖော်နိုင်သည်။ သငျသညျအနိုင်ရပေါင်းစပ်ထုတ်ဖေါ်အခါတိုင်း, သင်အနိုင်ပေးနှင့်အတူဆုခခြဲ့ပါလိမ့်မယ်။
လောင်းကြေးသည်ခြစ်ကတ်တွင်နိမ့်သည်။ ကြီးနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းလည်းရှိသည်။ ဒါဟာပထမ ဦး ဆုံးထီဂိမ်းအဖြစ်စတင်ခဲ့ပြီးယခုတဖြည်းဖြည်းချစ်မြတ်နိုးတဲ့လောင်းကစားရုံဂိမ်းအဖြစ်အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းအတွက်သူ့ဟာသူတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဂိမ်းကစားခြင်းကသင့်အားချက်ချင်းအနိုင်ရရှိရန်အခွင့်အလမ်းများကိုပေးသည်။ နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြင့်ယခုဂိမ်းကိုသင်၏မိုဘိုင်းပစ္စည်းများတွင်ပင်ကစားနိုင်သည်။
Pound Slots ကာစီနိုတွင်သင့်အနိုင်ရရှိမှုကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်အတွက်ကစားကွင်း၏ပျော်စရာများကိုပျော်မွေ့ရန်အတွက်သင်စုဆောင်းထားသောကဒ်ပြားများစွာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လောင်းကစားရုံရှိကဒ်ဂိမ်းကစားရန်အောက်ပါအတိုင်းပြုလုပ်ပါ။
၁။ ကျွန်ုပ်တို့ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိစာရင်းမှသင်ကစားလိုသည့် scratchcard ဂိမ်းကိုရွေးချယ်ပါ
4) ယခုသင်ကတ်တစ်ခုချင်းစီကိုထုတ်ဖေါ်နိုင်ပြီ (သို့) ထုတ်ဖော်ပြသခြင်းအားလုံးခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးကဒ်များအားလုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်းထုတ်ဖေါ်နိုင်သည်။
သင်၏အနိုင်ရရှိမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံတွင်ငွေ ၁၀၀၀၀ အထိမြှောက်နိုင်သည်။ သင်နှင့်အသင့်တော်ဆုံးသောနေရာကိုရွေးချယ်ပါ။ scratchcards ဂိမ်းတွင်အနိုင်ရရန်သင်ကိုက်ညီမည့်သင်္ကေတ ၃ ခုရှိသည်။ သင်ကိုက်ညီသည့်သင်္ကေတတန်ဖိုးအရဆုကိုသင်ရရှိပါလိမ့်မည်။ ငါတို့မှာကစားနိုင်သည့်ကစားနိုင်သည့်ကစားနိုင်သည့်ကစားနည်းများနှင့်ကစားနိုင်သည့်ကစားနိုင်သည့်ကစားနည်းများရှိသည်။
ကွဲပြားခြားနားသော scratchcards များသည်ကွဲပြားခြားနားမှုကိုအမှတ်အသားပြုသည့် attribute အမျိုးမျိုးရှိသည်။ သို့သော်၎င်းတို့အားလုံးတွင်လျှို့ဝှက်သင်္ကေတများကိုခြစ်ရာထုတ်ဖေါ်ခြင်းနှင့်တူညီသော gameplay ရှိသည်။ အနိုင်ရရန်အခွင့်အလမ်းများစွာရှိပြီး၎င်းသည်လူကြိုက်များသောအဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကဒ်များကိုမထုတ်ဖော်မီသင်၏အလောင်းအစားကိုပြင်ဆင်ရန်သတိရပါ။ ဂိမ်းကစားခြင်းမပြုမီသင်၏ကျွမ်းကျင်မှုများကိုသေချာစွာစစ်ဆေးပါ။
ကျွန်ုပ်တို့ကောင်းစွာကစားနိုင်သူအားလုံးအတွက်ဆုများနှင့်ဆုကြေးငွေများရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့စတိုးဆိုင်ရှိဂိမ်းများနှင့်အတူဆုချခံရမည့်သူများအနက်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ငွေအချို့ကိုသွင်းပြီးသင့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကွဲပြားခြားနားသော scratchcard ဂိမ်းများကိုစတင်ကစားပါ။ ထို့အပြင်သင်ပိုမိုအနိုင်ရရန်အခွင့်အလမ်းလည်းရှိပါသည်။ ရိုးရှင်းသောဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်အနိုင်ရရန်အခွင့်အလမ်းကောင်းများကသင့်ကိုစွဲမြဲစေလိမ့်မည်။ အခုမြန်မြန် !! ကိုယ့်ကိုယ်ကို Pound Slots ကာစီနိုတွင်မှတ်ပုံတင်ပြီးအကောင်းဆုံးခြစ်ကဒ်ဂိမ်းများကိုစိတ်လှုပ်ရှားစွာကစားပါ။